Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Desambra 2008
Tantara tamin'ny Desambra, 2008
Shina24 Desambra 2008
Madagasikara23 Desambra 2008
Tselatra · Amerika Latina21 Desambra 2008
Fikiro ilay tontolo miteny-manomeza ho an'i Global Voices!
19 Desambra 2008
Mila ny fanampianao ara-bola ny Global Voices hampitoetra azy hahaleo tena, afaka ary hanam-paharetana. Manomeza izao ho an'i Global Voices, ary ambarao (asehoy) ny fandraisana anjaranao amin'ny fanomezana vahana ireo tantara, sary sy lahatsary avy amin'olo-tsotra manerantany mampiasa ny aterineto hifandraisany amin'ny mponin'izao tontolo izao namany (ianao izany!).
Amerika Latina18 Desambra 2008
Mampatahotra ny maro ny heloka bevava any Meksika. Ny fakana an-keriny manokana moa dia mpitranga manerana ny firenena indrindra fa amin'ny ilany avaratra amin'ny firenena. Tranga mampihomehy amin'ity raharaha he recent abduction of U.S. anti-kidnapping expert Félix Batista is an ironic twist in this ongoing fight against organized crime, leaving...
Ny nosedecirlaerre.com, fivondronan'ny mpampihomehy Kostarikana an-tserasera, izay azo adika hoe "Tsy mahay manonona R aho" dia dia niantso ny fandraisana anjaran'ny Kostarikanina sy ny fahazarany amin'ny kolontsainy mba hamorina fiaraha-miasa antsary hoan'ny krisimasy. Ny fampahafantarana dia nantsoina hoe Uniting Ticos For Christmas and Requirements na hoe hampiray ny Ticos ho...